Faah faahin ku saabsan Taliyihii Ciidanka Garoonka Gaalkacyo Col. C/Salaan oo daqiiqado ka hor la dilay – Balcad.com Teyteyleey
Faah faahin ku saabsan Taliyihii Ciidanka Garoonka Gaalkacyo Col. C/Salaan oo daqiiqado ka hor la dilay
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Daqiiqado ka hor lagu dilay gudaha Garoonkaasi Taliyihii Ciidamada Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo Col. C/salaan Sanyare iyo Askari kale oo ka tirsan Ilaalada Garoonkaasi.
Sarkaalkaasi dilkiisa ayaa la sheegay inuu geystay Askari ka mida Ciidamada Puntland ee Ilaaliya Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo, isagoo Askarigaas uu Rasaas ku furay Taliyaha Dhintay iyo Ciidamo la socday,iyadoo Rasaastu ay sababtay inay ku dhintaan Taliyihii Ciidamada Garoonka Gaalkacyo ee Maamulka Puntland iyo Askari kale,waxaana ku dhaawacmay Ciidamo kale oo ka mida Ciidamada Puntland.
Dhanka kale lama oga sababta keentay dilka uu Askarigu u geystay Taliyaha iyo Askariga kale, iyadoo halkaasi ay durbadiiba gaareen qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Puntaland, waxaana la joojiyay Dhaq dhaqaaqii Garoonkaasi.
The post Faah faahin ku saabsan Taliyihii Ciidanka Garoonka Gaalkacyo Col. C/Salaan oo daqiiqado ka hor la dilay appeared first on Ilwareed Online.
Ciidamada Kenya oo Faarujiyay intooda badan Fariisimadii ay ku lahaayeen Jubada Hoose.